प्लाज्माथेरापीको लागि रक्त सङ्कलन शुरू – Jyoti News
प्लाज्माथेरापीको लागि रक्त सङ्कलन शुरू
ज्योति न्यूज२०७७, २५ भाद्र बिहीबार २१:३०
कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २५ का वडाध्यक्ष निलकाजी शाक्यले सङ्क्रमण निको भएकाको खोजी गरी रक्तदानमा उत्प्रेरीत गर्ने बताउनुभयो । स्थानीय अस्पतालसँगको सहकार्यमा रेडक्रसका सुनसरी, चितवन, भक्तपुर, बुटवल, नेपालगञ्ज, र कैलालीका रक्तसञ्चार सेवाले प्लाज्मा थेरापीको लागि रगत सङ्कलन शुरु गरिसकेकोछ । धनुषा र पोखरामा पनि यस्तो सेवा छिटै थालिने बताइएको छ । प्लाज्मा थेरापी उपचारको प्रभावकारिता अहिले पनि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । प्लाज्मा दान गर्दा दातालाई कुनै शारीरिक तथा मानसिक असर नपर्ने चिकित्सक संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले नागरिकको जीवन रक्षामा संलग्न हुन सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभएको छ ।